असार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै : ज्योतिषशास्त्र अनुसार क-कसले हेर्न मिल्छ ?
मुख्य पृष्ठसमाचारअसार ३१ गते खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै : ज्योतिषशास्त्र अनुसार क-कसले हेर्न मिल्छ ?
आगामी असार ३१ गते मङ्गलबार आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन खण्डग्रास (आधा चन्द्रमा ढाक्ने) चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
ग्रहणले राति १ः४६ बजेदेखि आग्नेय कोण (पूर्व र दक्षिणको बीच) बाट स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पोखरेलले बताए । दिउँसो ३ः१५ मा ग्रहणको मध्यकाल हुने र ४ः४५ मा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिने उनले बताए ।
उत्तराषाढा नक्षत्रमा लाग्ने ग्रहण धनु र मकर राशिका लागि कष्टकर हुने शास्त्रीय विश्वास छ । यी दुई राशिले ग्रहण हेर्नु हुँदैन । यसैगरी मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या र वृश्चिक राशि हुनेले पनि ग्रहण हेर्नु नहुने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रोमा उल्लेख छ ।
ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुङ्गुर भएर जन्मने, सिङ्गार पटार गरे कुष्ठ रोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने हिन्दु धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ ।